Seenaa Gabaabaa Jaal Dr. Fidoo Eebbaa (Taddasaa) – Adda Bilisummaa Oromoo
Jaal Dr Taddasaa Eebbaa Fidoo, baadiyaa Oromiyaa, Ona Najjoo, ganda Guduruu bakka addaa Qoxee Ginnasii keessatti, abbaa isaa obbo Eebbaa Fidoo fi haadha isaa aadde Dashii Tufaa irraa bara 1943 dhalate. Maatii qotee bulaa keessatti waan dhalateef, akkuma ijoollee maatii qotee bulaa tokkootti jabbii fi loon tiksaa, fi hojii qonnaa irraa hirmaachaa guddate. Haadhaa fi abbaan isaa , ijoolleen isaanii akka baratan fedha guddaa waan qabaniif, dura Dr. Taddasaa nama barnootaa Qeesitti galchan.
Kana booddee Jaal Dr. Fidoon nama barnootaa Swedish Evangelical Mission School Najjoo jirutti galmaa’uun barnoota sadarkaa duraa achitti barate. Utuu ulaa 7 baratuu akkan lafaa naannoo sanaa qabee ji’a lamaaf isa hidhee ture. Hidhaa yeroo gad dhiisees akka lammata Najjoo dhaqee hin baranne akeekkachiisee ture. Dr. Fidoon garuu akeekkachiisi abbaa qoroo utuu isa hin dhaabiin barnoota isaa haga ulaa saddeettitti achuma Najjootti baraatee 1956 xumurate. Barnoota sadarkaa 2ffaa, 9-12tti Jimma Agricultural Schoolitti barate. Manni barumsa Jimmaa kun hojii harkaa adda addaa barsiisa waan ta’eef Dr. Fidoon boorsaa fi qabattoo tolchee gurguruun horii argatee Haadhaa fi Abbaa isaatif mana ijaaree ture.
Barnoota sadarkaa 2ffaa akka xumureen Hara-mayaa Agricultural Collegetti waggaa afur baratee, qabxii olaanaa fiduu dhaan digirii tokkoffaa (BSC) argachuun 1965 eebbifame. Barnoota isaa akka itti fufuus iskolarship waan argateef USA, Wisconsin State University tti galma’ee digirii isaa lammaaffaa (MSC) argachuu dhaan eebbifame.
Biyyatti deebi’uun Hara-Mayaa College barsiisuu eegale. Barsiisuun cinaatti qormaata sayensii adda addaa godhaa ture. Qormaata inni godhe haga har’aatti bakka guddaa qabatee jiruu Xaafii irratti qorannoo inni godhee dha. Qorannoo Xaafii kana bara 1969 xumuruun kitaaba xiqqaa tokko barreessera. Qorannoo Dr. Fidoon gaafa sana jalqabeen har’a gosa Xaafii 3842 akka jiranii fi maqoota xaafii kan akka Daabii, Kara Debi, gea lamme, muri fi kkf moggaafamanii jiru.
Ammas carraa barnootaa argateen British Columbia University, Vancouver, Canada dhaqee barachuun, bara 1974 Ph. D, dhaan eebbifame. Yeroo barataa ture waldaa baratoota Afrikaa dura taa’aa tahee gaggeessaa ture. Utuu biyyatti hin deebi’in sochii barattoota Itophiyaa irraa hirmachuuf gara Awuropaa deemee ture. Achi dhaqee sochiin barattootaa isa quubsuu didnaan gara biyyaatti deebi’e. Bara 1975 keessa Addisalem Genetii wajjin gaa’ila ummachuun ijoollee lama, Urjii fi Melbaa godhatan.
Ethiopian Research Institute keessatti qaxaramuun hojii research itti fufe. Ethiopian Gene Bank ykn Plant Genetic Resource Center jedhamu bara 1976 dhaabuun haga 1979 biyyaa bahutti hogganeera. Akeeki dhaabbata kanaa sanyii mukkeetii fi midhaanii biyyicha keessa jiru walitti qabuun akka hin badneef ol kaa’u dha. Haalli qilleensa biyya keenyaa baddaa, gammoojjii fi badda-daree waan ta’eef, gosti mukaa fi midhaanii illee akkasuma gara-gara. Isaan kun akka hin badnetti walitti qabuu fi akka ija gaarii godhatan qorachuun akeeka dhaabata kanaa ture. Dhaabbati kun har’a Ethiopian Biodiversity Institute jedhamee beekama. Dhaabbata kana bu’ureessuu keessatti Dr. Fidoon qooda guddaa akka qabu mootummaan Itophiyaa illee beekumsa kennee jira.
Yeroon Dr. Fidoon barnoota Ph. D isaa xumuree biyyatti deebi’e yeroo ABO bu’ureeffamaa jiru ture. Innis bu’ureessisootatti dabalamuun qooda isa irraa eegamu kennuu jalqabe. Maadheelee hiccitin socho’an keessatti hirmaachuun dirqama isaa baheera. Bara 1978, karoorri waraana bilisummaa Oromoo, Dirree Bahaa irraa gara naannoo Gudar-Ambotti dabarsuu akka karoorfameen Dr. Fidoon geejjiba qopheessuu keessatti hirmaate. Waraanni bakka jedhame gahee osoo haala hin mijjeeffatin oduun isaa mootummaa bira gahee miseensoti WBO
sun qabaman. Warri qabame keessii isaa keessatti taargaan makiinaan waraanni itti geejjifame argame. Warri tikaa yeroo qoratan kan makiina sana kiraayesse Dr. Fidoo tahuu baranii qabanii Maa’ikalaawwitti hidhan.
Dr. Fidoon yeroo Ethiopian Gene Bank dhaabe gargaarsa mootummaa Jarmanii fi Siwudin irraa kennameen waan ta’eef, hidhamuun isaa hojii mootummoota kanaa wajjin hojjatamu irratti dhiibbaa qabaate. Mootummooti kun lameen Dr. Fidoo gad dhiiftan malee gargaarsa kenninu ni dhaabna jedhanii mootummaa irratti dhiibbaa godhan. Mootummaan Dargii utuu hin jaallatan Dr. Fidoo hidhaaa haa hiiku malee tika dhaabbata irra kaa’an. Dr. Fidoonis akka eegamaa jiru waan beekuuf karaa itti biyyaa bahu mijjeeffachuutu irra ture. Odeessa mootummaan deebisee hidhuuf akka murteesse akka dhaga’een, sagantaa hojii gara Wallaggaa geessu baasuun haga magaalaa Kurmuk, daangaa Sudaan deemuu qopheesse. Dr. Fidoon ganama ganama fiffigee isportii hojjachu sagantaa isaa dhaabbataa ture. Kanaaf bakka bulan hundaatti ganama tuttaa isaa uffatee fiffigee isportii hojjata. Akkuma saganteeffametti magaalaa Kurmuk gahaniii bulanii, ganama isportii hojjachuuf tuttaa uffatee fiffiguu jalqabe. Utuu warri isa eegan quba hin qabaatiin fiigee daangaa cehee Sudanitti harka kenne. Akka kanatti biyyaa fi maatii isaa, ijoollee daa’ima waggaa afurii gadii lama, haadha irratti dhiisuun biyyaa bahe. Haati manaa Dr. Fidoos utuu baayyee hin turin, maadhee ABO ti jedhamtee waggaaa 10 hidhamte. Ijoolleen isaa yetiimaa ta’an. Ilmi isaa, Melbaa jedhamuu utuu taphatuu boolla bishaanitti kufee lubbun isaa dabarte. Haala kanaan Dr. Fidoon qabsoo jedhee qe’ee fi maatii isaa dhiisee biyyaa bahee kan inni deebi’e bara 1991 erga Dargiin kufee ture.
Walgahii Gumii Sabaa 2010 godhame irratti miseensa Shanee Gumii akka ta’u sagalee guutuun filame. Akka kanatti Gaafatamaa Damee Dantaa Alaa ta’ee dirqama isaa baheera. Murnootii adda addaa dhaaba keessaa bahan wajjin araara buusuuf bara 2011 koree ramadamte hogganaa ture.
Sadarkaa adda addaatti hoggana ABO irraa qooda fudhataa turee, Kora Sabaa 4ffaa 2017, Af’aabet, Eritrea keessatti godhame irratti fedha isaan hoggana kennu irraa of buusee Yuba ta’e. Dirqama qabsoo itti kennamu raawwachuu duwwaa utuu hin taane Dr. Fidoon dandeetti barreessuu qabuun maqootii dhiiraa fi dhalaa Oromoo, 5000, hiikaa isaanii wajjin yeroo dheeraa dhaaf walitti qabaa ture, bara 2018 kitaaba Moggaasa: Maqoota Oromoo fi Hiikota Isaanii jedhu maxxanse. Kitaabni kun maqooti Oromoo fi hiikaa isaan tarrisuu duwwaa osoo hin taane maqaan maal akka ta’e, sirna maqaan itti moggaafamu, madda maqoota Oromoo, ayyaanota fi aadaa Oromoo kan gad fageenyaan ibsi dha.
Bara 2018 yeroo hogganni ABO biyyatti deebi’e J. Fidoon Asmaraa dhaquun, hogganaa wajjin waggaa 27 booda Oromiyaatti deebi’uu danda’e. Sagantaa dhaabni qopheesse irraa hirmachuun, godinoota Qellem fi Dhiha Wallaggaa keessa naanna’uun ummata dubbisaa fi kaayyoo ABO ibsuu irraa hirmaatera. Sana boodas bara 2019 dhuma jala Oromiyaatti deebi’uun waan isaa danda’amu gumaachuu yaalee ture.
Bara 2020 jalqaba irratti USA tti deebi’ee milli isaa dhukkubuu jalqabnaan yeroo ilaalamu dhukkuba kaansarii sammuu akka isa qabate itti himan. Dr. Fidoon akkuma qabsootti cichaa fi salphaatti hin sarmine, kaansarii kanaan waggaa lama guutuu waldhaansoo qabaa turee, Caamsaa 1, 2022 moo’amee du’aan boqoteera.